Writer Magic, Author at
ဦးဝေဠုကျော်ရှေ့နေမှ မသင်းသင်းဦးအား မမှန်မကန်လိမ်လည် ထွက်ဆိုမှုဖြင့် အရေးယူပေးရန် ရုံးတော်တွင်လျှောက်ထားလိုက်ပြီ…. မသင်းသင်းမှတခြားအမျိုးသား တဦးကိုလည်း ကာမလိမ်လည်မှုနဲ့ တရား စွဲခဲ့ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်နေ မသင်းသင်းဦး VS ကိုဝေဠုကျော် ပြန်လှန်စစ်မေးခြင်း (ဒုတိယ) အကြိမ်ကိုဝေဠုကျော်၏ ရှေ့နေမှ […]
ကျမ ဒီပို့စ် ကို ကျမ လို အိမ်အကူ မရှိ မဖြစ် ခေါ်ထားရသူ များ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ် ပါတယ် …။ အိမ် မှာ ကျမ နဲ့ အသက် […]
တန်ဘိုး အလွန်ရှိသော သဘာဝဆေးမြီးတိုများ ဝက်ခြံပျောက်နည်း …. ကြက်ဟင်းခါးအစေ့ကို ဆားနှင့်ရောပြီးညက်အောင်ကြိတ်ပါ။ ရလာသောအနှစ်ကိုအရက်အနည်းငယ်နှင့်သင့်ရုံဖျော်ပြီးနောက် ရလာသော အရည်နှင့်ဝက်ခြံများကိုလိမ်းပေးပါက 0က်ခြံများ ပျောက်ပါသည်။ အရိုးစူးလျှင်ပျောက်နည်း …. ငါးရိုးစူးလျှင် လည်ချောင်းထဲမှ ထုတ်မရပါကလျှင်မြန်စွာကြက်ဥအစိမ်းကိုခွဲပြီး တစ်ခါတည်းမျိုချလိုက်ပါက ငါးရိုးသည်တစ်ခါတည်းလျှောကျသွားပါလိမ့်မည်။ ခြေထောက်ကို […]
ဆံသားပါးတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ဆံသားကောင်းပြီး အုံထူနေဖို့နေ့စဉ် ဂရုစိုက်ပေးသင့် အချက်(၅)ချက် ဆံသားပါးတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်က ဆံသားကောင်းပြီး အုံထူနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းတမ်းပျက်ဆီးနေတဲ့ ဆံပင်မျိုး ကို ဘယ်သူမှ မလိုချင်ကြပါဘူး။ ဆံသားကောင်းပြီး အုံထူနေဖို့ဆိုရင် နေ့တိုင်း […]
မီတာခတွေ လိုတာထက် ပိုမဆောင်ရစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အရာများ မီတာခတွေ အများကြီးဆောင်နေရလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်သုံးတာထက် ပိုပြီး မီတာခဆောင်နေရတယ်လို့ သံသယရှိနေရတာကလည်း တကယ့်ကို စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ဒီအတွက် မီတာခတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ကျခံဖို့ သင့်ဘက်ကနေ […]
“လှိမ့်ဝင်=တည်သုံး အိုးနှစ်လုံး အဆောင် အကြောင်း” တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံးယတြာက ကျွန်တော်စ ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ ။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ ။ ၁။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ ၂နှစ်ခွဲနေမှ ပြန်တွေ့တော့ သူ့မိသားစုကတော်တော်လေး အဆင်ပြေနေပြီး အရင် […]
“ ကလေး မုန့်ဖိုး အစိုးရ ပေးနိုင် ပါစေ ” ‘မေမေ မုန့်ဖိုး ’ ‘သေနာလေး…ဒီမှာ နှစ်လုံးမပေါက်တဲ့ကြား ထဲ ဒင်းက တစ်မှောင့်’ ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံက ကျွန်တော့် ကို တော်တော် […]
နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်ပေမဲ့ မျက်စိကန်းတဲ့အထိ 8နှစ်ခန့် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့အဖြစ် အမြဲနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံနေရပြီး ကြောက်လန့်တကြားနေထိုင်နေရတဲ့ဘဝမျိုးကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ ။ ဘဝတစ်သက်လုံး သူစိမ်းအိမ်မှာကျွန်ခံနေရသလိုပေါ့ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနေ မလေးရှားနိုင်ငံသို့လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးဟာ သူမရဲ့အလုပ်ရှင်တွေရဲ့နှိပ်စက်ညှင်းပန်းတာကို 8နှစ်ခန့်ခံစားခဲ့ရပြီး သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ နှင့် မျက်လုံးကန်းသွားတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် […]
ဝလို့ စိတ်ညစ်နေသူတွေ ကိုယ်ရေစစ်ပြီး ဗိုက်ကျသွားစေမယ့် ဆေးနည်း
မိမိရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုကြောင့် ၊ ဒါမှမဟုတ် အမြဲထိုင်နေရတဲ့ မိမိရုံးအလုပ်ကြောင့် ဝလာတတ်ပါတယ်။ဒီလို ဝလာလို့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့…..ဝလွန်းသူများအတွက် ကိုယ်ရေစစ် ပိန်စေနိုင်တဲ့ ဆေးနည်းကောင်းလေး တစ်ခွက်ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်….“စမုံစပါး အမှုန့် တစ်ကျပ်သားကို ရေနွေးဆူဆူတွင် ထည့်၍ ( ၁၀ […]
လက်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ထက် ကူးစက်မှုနှုန်း ( ၆ )ဆ ပိုမြန်တဲ့ ကိုဗစ်ဗီဇ အသစ် တောင်ကိုရီးယားမှာ ပေါ်ထွက်လာ
တောင် ကိုရီးယား မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ဗီဇအသစ် တစ်မျိုး ဟာ လက်ရှိ ဗိုင်းရပ်စ် ထက် ကူးစက်မှုမြန်နှုန်း (၆)ဆအထိ ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆိုးလ်မှာ နိုက် ကလပ်တွေ ပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ အဲဒီကနေ […]